Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi | Ezigbo Okwukwe
Ezigbo Ụmụnna Anyị:
Ọ bụ n’Ụlọ Nche Jenụwarị 1, 2008 ka anyị bidoro ibipụta isiokwu mara mma a na-akpọ “Ṅomie Okwukwe Ha.” Ụlọ Nche ahụ bụ Ụlọ Nche ọhaneze mbụ anyị bipụtara. Kemgbe ahụ, anyị na-ebipụta isiokwu ọhụrụ kwa ọnwa atọ ọ bụla n’isiokwu a bụ́ “Ṅomie Okwukwe Ha.” Obi dị anyị ụtọ na anyị na-eme nke a.
Olee otú obi dị ndị na-agụ isiokwu a kemgbe ahụ? Mgbe otu nwaanyị gụchara isiokwu kwuru banyere Mata, o dere, sị: “Mgbe m gụrụ ya, m chịrị ọchị n’ihi na m na-akpacha àgwà ka Mata. Mgbe ọ bụla ndị mmadụ bịara na nke m, anaghị m ezu ike ebe m na-achọ ka m lee ha ọbịa nke ọma. Nke a na-eme mgbe ụfọdụ ka m chefuo na m kwesịrị ịhapụtụ ihe m na-eme soro ha nọrịa.” Mgbe otu onye na-eto eto gụchara isiokwu nke kọrọ gbasara Esta, o dere ihe ọ mụtara. Ọ sịrị: “Uwe na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu na-echukarị ndị mmadụ ụra. O nwere mgbe o mere m otú ahụ. Ama m na anyị kwesịrị ịna-adị mma n’anya, ma anyị ekwesịghị ikwe ka ejiji na-echu anyị ụra.” O kwukwara, sị: “Ihe dị Jehova mkpa bụ ụdị mmadụ anyị bụ.” Mgbe otu nwanna nwaanyị gụchara isiokwu kwuru banyere Pita onyeozi, obi tọrọ ya ezigbo ụtọ, ya edee, sị: “Isiokwu ahụ tọmịịrị m. Ọ dị m ka m̀ nọ mgbe ihe a kọrọ na ya na-eme. Mgbe m na-agụ ya, uche m niile dị n’ihe m na-agụ n’ihi otú o si atọ m ụtọ.”
Ndị a niile na ọtụtụ ndị ọzọ anyị natara akwụkwọ ozi ha kelere anyị maka isiokwu ndị ahụ. Ihe ha dere gosiri na ihe Pọl onyeozi dere na Baịbụl n’oge gara aga bụ eziokwu. O dere, sị: “Ihe niile e dere n’oge gara aga, e dere ha iji nye anyị ntụziaka.” (Rom 15:4) N’eziokwu, Jehova mere ka e dee akụkọ ndị ahụ na Baịbụl ka e jiri ha kụziere anyị ọtụtụ ihe dị mkpa. Onye ọ bụla n’ime anyị nwere ihe ọ ga-amụta n’akụkọ ndị ahụ n’agbanyeghị afọ ole anyị ferela Jehova.
Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ a ozugbo o kwere gị mee. Jirikwanụ ya na-amụ ihe n’ofufe ezinụlọ unu. Ọ ga-atọ ụmụaka gị ụtọ. Mgbe a ga-amụwa akwụkwọ a n’Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ, ya enwekwala izu ị ga-ahapụ ịga ọmụmụ ihe. Meda obi gụọ ya ma chebara ihe ị na-agụ echiche. Were ya na ị nọ mgbe ihe ị na-agụ na-eme. Mee ka obi gị dịrị n’ihe ị na-agụ. Gbalịa ka ihe metụrụ ndị ị na-agụ akụkọ ha n’obi metụkwa gị n’obi. Gbalịakwa ka ị hụ ihe ha hụrụ. Jiri ihe ha mere mgbe ihe ụfọdụ mere ha tụnyere ihe ị gaara eme ma ọ bụrụ gịnwa ka ihe ndị ahụ mere.
Obi dị anyị ụtọ iwepụtara unu akwụkwọ a. Ekpere anyị bụ ka akwụkwọ a baara unu na ezinụlọ unu uru. Maranụ na anyị hụrụ unu n’anya, anyị chọkwara ka ihe dịrị unu ná mma,
Ṅomie Okwukwe Ha—Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi